व्यस्त सडक, दिउँसै पिच: काठमाडौं रंग्याउन सरकारलाई चटारो !
व्यस्त सडक, दिउँसै पिच: काठमाडौं रंग्याउन सरकारलाई चटारो
काठमाडौं, ८ भदौं । बौद्ध–जोरपाटी सडकले यस वर्ष निकै चर्चा पायो । बर्खा लागेसँगै आहाल बनेको सडकका बेहाल तस्बिरले सामाजिक सञ्जालका भित्ता मात्रै रंगिएनन्, राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा हेडलाइन समाचार बन्यो ।
चार वर्षदेखि हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको मार खेपेका स्थानीयले विभिन्न प्रतीकात्मक विरोध गरे । तैपनि जनताको पीडाले सरकारलाई घोचेन ।
तर, केही दिनयता सरकारलाई छटपटी भयो । रातदिन गरेर भए पनि बौद्ध–जोरपाटी सडक टिलिक्क पार्नैपर्ने भयो । चार वर्षदेखि सुस्त सरकार एकाएक जाग्यो । दुई हप्तामै सडक पिच गरिदिने अवस्थामा पुग्यो ।
हिले स्थानीय जनता सरकारको काम देखेर चकित छन् । ‘बौद्ध–जोरपाटी सडक पिच सक्न १२ भदौसम्म लाग्दैन,’ दुई साताअघि मात्र उक्त सडक १२ भदौभित्र निर्माण सक्न निर्देशन दिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ भन्छन्, ‘भोलि नै गएर हेर्नुस्, त्यो सडकमा धुलो र हिलो पाउनुहुन्न ।’
हो, सरकार अहिले काठमाडौं रंग्याउन व्यस्त छ । बौद्ध–जोरपाटी सडक मात्रै होइन, आजकाल काठमाडौंका मुख्य सडकमा खाल्डा देखिनु हुन्न, सडक विभागले टाल्न निर्देशन दिइहाल्छ ।
काममा पहिलेजस्तो ढिलासुस्ती पनि हुन्न, दिउँसै गाडी जाम गराएर भए नि पिच भइहाल्छ । कारण हो, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन । १४ र १५ भदौमा हुने बिमस्टेकमा भाग लिन सदस्यराष्ट्रका प्रतिनिधि १२ भदौबाटै काठमाडौं आउन थाल्नेछन् । त्यसैले काठमाडौं रंग्याउन सरकारलाई चटारो छ ।, आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
म्यादीका एघार घर पहिरोको जोखिममा
काभ्रेमा सहकारीको दर खाँदा ५० जना बिरामी
दसैँ मनाउन विदेशबाट घर फर्किनेको घुइँचो
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दु:ख
कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ कि ६० भन्नेमा दुई मन्त्रालयको राय बाझियो
अज्ञात समुहद्वारा त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आगलागी
बलात्कारी जोगाउने एसपीलाई पनि जनसेवाश्री पदक !
पुस १३ देखि पोखरामा सडक महोत्सव
प्रदेश २ मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, मिथिला भोजन र पान खुवाउने तयारी
सामाजिक सञ्जालले खोजिदियो हराएका बालक
रुखले लागेर महिलाको मृत्यु
भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला : व्यभिचार अपराध होइन, महिला ‘पतिको सम्पत्ति’ होइन
त्रिविको मनोमानीः दुई वर्ष अघि पास, अहिले फेल
ससेज बनाउने ठाउँको यस्तो हालत : कुहिएको मासु दुर्गन्धित उद्योग, अनुगमनमा गएकाहरु नाक थुनेर भागे